Tag: ozi infographic | Martech Zone
Kpido: infographic email
Nkewa ndepụta email gị na -arụ ọrụ dị mkpa na ọganiihu mgbasa ozi email ọ bụla. Mana gịnị ka ị ga - eme iji mee ka akụkụ a dị mkpa rụọ ọrụ maka gị n'oge ezumike - oge kacha enye ego n'afọ maka azụmahịa gị? Isi ihe dị na nkewa bụ data… yabụ ịmalite ijide data ọnwa ole na ole tupu oge ezumike bụ nzọụkwụ dị oke mkpa nke ga -eduga ntinye aka na ịre ahịa email ka ukwuu. Nke a bụ ọtụtụ
N'oge na-adịbeghị anya, anyị kesara otu ihe ọmụma banyere otu esi agbanwe ọnụọgụ ntinye aka nke email gị, yana ụfọdụ nyocha ọmụmụ na ọnụ ọgụgụ banyere ihe enwere ike ime gbasara ha. Ihe omuma ihe omuma a site na ndi mọnk ozi ndi email, ozi ndi ozo, weghaara ya ihe omuma di omimi iji nye atumatu mgbasa ozi n'ezie maka imeghari mmeghari email gi. Nchịkọta email nke mebiri site na 25% kwa afọ. Na, Dabere na akụkọ 2013 Marketing Sherpa, 75% nke ndị debanyere aha email
Tọzdee, Septemba 10, 2015 Douglas Karr
Izu a ka m zutere otu ụlọ ọrụ na-eche echiche ịhapụ email na-eweta ọrụ ha na-ewu ụlọ email sistemụ n'ime. Ọ bụrụ na ị jụọ m afọ iri gara aga ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ezigbo echiche, agaraghị m ekwu. Agbanyeghị, oge agbanweela, teknụzụ nke ESP dị mfe iji mejuputa ma ọ bụrụ na ị maara ihe ị na-eme. Ọ bụ ya mere anyị ji mepụta CircuPress. Gbanwee na Ndị Na-enye Ọrụ Email? Mgbanwe kasịnụ na